Gbasara Anyị | Hangzhou Zkong Networks Co., Ltd.
ESL anyị dị njikere iji ya na teknụzụ Bluetooth na NFC, nke zuru oke, na ngosi agba atọ. Ewezuga igosipụta nkọwapụta ngwaahịa dịka ọnụahịa, ngwaahịa, na nkwalite, anyị nwekwara ike hazie aha mmado maka ozi ọ bụla nwere ike ịgbasa na ụdị ọdịdị dị mkpa.
Site na teknụzụ dị elu nke igwe ojii na nkwukọrịta ikuku, Zkong ejirila zute ọtụtụ ihe dị iche iche ọtụtụ puku ụlọ ahịa gburugburu ụwa, ma nyere ha aka ịlanarị ihe ịma aka nke arụmọrụ arụmọrụ dị ala, ọnụego ọnụ ahịa dị elu, ọnụ ahịa azụmaahịa dị egwu ma na-ebili. .
Site na n'ichepụta akara elektrọnik (ESLs), anyị na-etolite dị ka ụlọ ọrụ na-eduga ndị na-enye ngwaọrụ IoT na nyiwe igwe ojii nke na-anapụta usoro na ọrụ zuru oke. Ihe ngosiputa ohuru anyi bu uzo di nkpa maka ulo ahia di nma iji gbanwee brik na ngwa agha ndi ozo na ahia Omnichannel. Anyị na-erite uru na ndị na-ere ahịa na ndị na-azụ ahịa site na ahụmịhe kachasị mma n'ime ụlọ ahịa, nke ndị ahịa nwere ike ịnweta ọnụahịa, nkwalite, ọkwa ngwaahịa, nyocha mmekọrịta mmadụ na ozi ọ bụla ha tụrụ anya ya, ndị na-ere ahịa nwere ike ịnweta nghọta ndị ahịa ozugbo site na nnukwu data ma melite ahịa ha n'ụzọ dị irè karị ma chekwaa ego.
Ruo ihe karịrị afọ 15, anyị enwetala ndekọ azụmahịa dị ịrịba ama, ma jeere ndị ahịa si mba 35 ozi. Anyị na ndị anyị na-azụ ahịa na-arụkọ ọrụ ọnụ dịka ọtụtụ ndị ahịa azụmaahịa n’ụwa dịka Alibaba Group, Lenovo Group, Vodfone, China Mobile, Coop Group, E-ink, Qualcomm na ọtụtụ ndị ọzọ.
Echiche anyị bụ itinye Cloud Electronic shelf labels (ESLs) maka Smart Smart Store ọ bụla. Ebumnuche anyị bụ ịmụba netwọkụ azụmaahịa na-abawanye uru n'ụwa niile. Anyị na-anabata ndị mmekọ gburugburu ụwa iji guzobe mmekọrịta miri emi, anyị dịkwa njikere ịkwalite ahịa gị ma bulie akụkụ gị n'akụkụ na usoro ndị mepere emepe.
Mee ka ụlọ ahịa 3000 na-ekwenye ekwenye ịhapụ aha akwụkwọ aha akwụkwọ akụkọ ọdịnala ma kwuo okwu na shelf.